Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.6.2 weydiiyay
Waji weyn oo waydiisashada iyadoo la isticmaalayo hab lagu saadaalinayo in la isku daro xogta sahanka ee dad yar oo leh ilaha xogta ee dad badan.
Hab kale oo lagu daro sahanka xogta iyo ilaha xogta waa nidaam ah oo aan wici doono taleefanka codsiyada . Marka la weydiiyo su'aalaha la weydiiyay, cilmibaadhuhu wuxuu isticmaalaa hab lagu saadaalinayo in la isku daro qadar yar oo xogta sahanka ah iyada oo la adeegsanayo ilaha xogta weyn si loo soo saaro qiyaaso miisaan ama hubin aan macquul ahayn iyada oo labada ilbixinba si gooni ah u heli karaan. Tusaale muhiima oo ah xoojinta weydiinta ayaa ka timaada hawlaha Joshua Blumenstock, oo raba in ay ururiyaan xog ku caawin kara hagitaanka horumarka dalalka saboolka ah. Waqtigii hore, cilmi baarayaashu waxay ururinayaan xogta noocan ah guud ahaan waa inay qaadaan mid ka mid ah laba waji: baadhitaano muunad ah ama tirakoobyo. Tusaalooyinka sahanka, halkaas oo cilmi-baadhayaashu ay wareysteen tiro yar oo dad ah, waxay noqon karaan kuwo jajaban, waqtigooda, iyo raqiis ahaanba. Si kastaba ha ahaatee, sahamintan, sababtoo ah waxay ku saleysan yihiin saamiga, inta badan waa ay xaddidan yihiin qaraarkooda. Iyada oo sahan tijaabo ah, badanaa way adag tahay in la sameeyo qiyaaso ku saabsan gobollada juqraafi ee gaarka ah ama kooxo gaar ah. Tirakoobyada, dhanka kale, iskuday in ay wareystaan ​​qof walba, oo sidaas darteed waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro qiyaasaha gobollada yaryar ee juqraafi ah ama kooxaha dadweynaha. Laakiin tirakoobyada guud ahaan waa qaali, cidhiidhi oo xoogan (waxay ku jiraan oo keliya tiro yar oo su'aalo ah), oo aan waqtigooda ku jirin (waxay ku dhacaan jadwal go'an, sida 10-kii sano ee kasta) (Kish 1979) . Halkii aad ku dhajin lahayd baadhitaano muunad ah ama tirakoob, muuji haddii cilmi-baarayaashu ay isku dari karaan sifooyinka wanaagsan ee labadaba. Ka fikir haddii cilmi-baarayaashu ay waydiin karaan su'aal kasta qof kasta maalin kasta. Sida iska cad, baaritaankan markasta oo dhan waa nooc ka mid ah fikradaha sayniska bulshada. Laakiin waxay u muuqataa inaan bilaabi karno in aan arrintan ku soo koobno ​​iyada oo la isugaynayo su'aalaha sahan ee tiro yar oo dad ah oo leh raadoyinka dijitaalka ah dad badan.
Baaritaanka Blumenstock wuxuu bilaabmay markii uu iskaashi la yeeshay shirkadda ugu weyn ee taleefanka gacanta ee Rwanda, shirkaduna waxay bixisay diiwaan galin aan la aqoonsan oo ka timid qiyaastii 1.5 milyan oo macaamiisheed intii u dhexaysay 2005 iyo 2009. Diiwaankaan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan wicitaan kasta iyo fariin qoraal ah, sida wakhtiga bilowga, , oo qiyaastii goobta juqraafiga ee qofka soo waca iyo kan qaabilaadda. Ka hor inta aan ka hadlin arrimaha tirakoobka, waxaa haboon in la tilmaamo in tallaabada ugu horreysa ay noqon karto mid ka mid ah kuwa ugu adkaa cilmi baarayaal badan. Sida aan ku tilmaamay in cutubka 2, ugu ilaha xogta weyn yihiin geli karin in ay cilmi. Gaar ahaan macluumaadka macaamiisha, gaar ahaan, gaar ahaan lama heli karo sababtoo ah asal ahaan waa wax aan macquul aheyn in la aqoonsado oo ay hubaal tahay inay ku jiraan macluumaadka kaqaybgalayaasha inay tixgelinayaan xasaasiga ah (Mayer, Mutchler, and Mitchell 2016; Landau 2016) . Xaaladdan gaarka ah, cilmi-baarayaashu waxay ka taxaddareen inay ilaaliyaan xogta, shaqadoodana waxay kormeeraan dhinac saddexaad (ie, IRB). Waxaan ku soo laaban doonaa arrimahaan anshaxeed ee faahfaahin dheeraad ah ee cutubka 6aad.
Blumenstock waxay xiiseyneysay in ay cabirto hanti iyo wanaaga. Laakiin sifooyinkaasi ma aha kuwo si toos ah ugu jira diiwaanka telefoonka. Si kale haddii loo dhigo, diiwaanka telifoonnada buuggu waa mid aan dhamaystirnayn cilmi-baaristan-muuqaal guud oo ah ilaha xogta waaweyn ee looga hadlay si faahfaahsan cutubka 2. Hase yeeshee, waxay u muuqataa in diiwaannada taleefanka laga yaabo inay heystaan ​​macluumaad qaar oo si dadban u bixin kara macluumaadka ku saabsan hanti iyo wanaaga. Iyadoo la tixgelinayo suurtagalnimada, Blumenstock wuxuu waydiistay inay suurtagal tahay in lagu tababaro mashiinka wax lagu barto si loo saadaaliyo sida qofku uga jawaabi doono daraasad ku salaysan diiwaankooda wicitaanada. Haddii ay tani suuragal tahay, Blumenstock waxay isticmaali kartaa qaabkan si loo saadaaliyo jawaabaha sahanka ee dhammaan macaamiisha 1.5 milyan.
Si loo dhiso oo loo tababaro qaabka noocaas ah, Blumenstock iyo kalkaaliyeyaasha cilmi baarista ee machadka Kigali ee Sayniska iyo Teknoolajiyadda ayaa loogu yeeraa tiro muunad ah oo ku saabsan kun macaamiil. Cilmi-baadhayaashu waxay sharraxeen ujeedooyinka mashruuca ee kaqaybgalayaasha, waxay waydiisteen ra'yigooda inay isku xiraan jawaabaha sahanka ee diiwaannada taleefanka, ka dibna waxay waydiiyeen su'aalo taxane ah si loo qiyaaso hantidooda iyo ladnaanta, sida "Ma leedahay raadiyaha? "iyo" Miyaad leedahay baaskiil? "(fiiri jaantuska 3.14 ee liiska qayb ahaan). Dhamaan kaqeybgalayaasha baaritaanka waxaa lagu siiyay dhaqaale ahaan.
Marka xigta, Blumenstock waxay isticmaashaa nidaam laba-talaabo ah oo lagu barto mashiinka mashiinka: injineernimada muusikada oo ay raacaan barashada kormeerka. Marka hore, talaabada injineernimada , qof kasta oo la waraystay, Blumenstock wuxuu u beddelay diiwaanka call-celinta ee sifooyin gaar ah oo ku saabsan qof kasta; aqoonyahannada xogta ayaa laga yaabaa inay ugu yeeraan sifooyinkaas "sifooyinka" iyo saynisyahanno bulsheed waxay u yeeri lahaayeen "doorsoomayaasha". Tusaale ahaan, qof kasta, Blumenstock ayaa xisaabiyay tirada guud ee maalmaha ee waxqabadka, tirada dadka kala duwan ee qofku la xidhiidhay, xaddi lacageed lagu qaato wakhtiga hawada, iyo wixii la mid ah. Dhab ahaan, injineernimada muuqaalka wanaagsan waxay u baahan tahay aqoonta goobta cilmi-baarista. Tusaale ahaan, haddii ay muhiim tahay in la kala saaro wicitaanada gudaha iyo kuwa caalamiga ah (waxaan laga yaabaa in laga yaabo in laga yaabo inay dadku u yaqaanaan caalamka si ay u noqdaan kuwo hodon ah), ka dibna tan waa in lagu sameeyaa talaabada injineernimada. Cilmi-baaraha oo leh faham yar oo ku saabsan Rwanda ayaa laga yaabaa inaanay ku jirin mawduucan, ka dibna waxqabadka saadaalin ah ee tusaaluhu ku jiri doono.
Marka xigta, tallaabada waxbarasho ee la kormeero , Blumenstock waxay samaysay hab lagu saadaaliyo jawaabta sahanka ee qof kasta oo ku saleysan sifooyinkaas. Xaaladdan oo kale, Blumenstock waxay isticmaashay qalooca dhaqaale, laakiin wuxuu isticmaali jiray noocyo kale oo tirakoob oo kale ama mashiinno waxbarasho oo kale.
Sidee buu u shaqeeyaa? Miyuu Blumenstock awood u leeyahay inuu saadaaliyo jawaabaha su'aalaha sahanka sida "Miyaad leedahay raadiyaha?" Iyo "Miyaad leedahay baaskiil?" Adoo isticmaalaya sifooyinka laga soo qaatay diiwaannada telefoonka? Si loo qiimeeyo waxqabadka asaasiga ah ee uu saadaaliyay, Blumenstock waxay isticmaashaa iskutalabixin , farsamo caadi ahaan loo isticmaalo sayniska macluumaadka, laakiin marar dhif ah ee sayniska bulshada. Himilada iskudhafashada ayaa ah in la bixiyo qiimeyn caddaalad ah oo ku saabsan waxqabadka asaasiga ah ee ku salaysan qaabka ay ku tababartaan kuna tijaabinayaan xogaha kala duwan ee xogta. Gaar ahaan, Blumenstock wuxuu xogtiisa u kala qaybiyay 10 jibbaarane oo 100 qof ah. Kadibna, wuxuu u adeegsaday sagaal ka mid ah qabriga si uu u barto qaabkiisa, iyo waxqabadka saadaalinta ee modelka la tababbaray ayaa lagu qiimeeyey jaranjarada soo hadhay. Waxa uu ku celiyay nidaamkan 10-jeer-kasta oo la socdo xogta oo midba midka kale u noqonayso xogta ansixinta-oo celcelis ahaan natiijooyinka.
Xaqiijinta saadaashu waxay sare u kacday sifooyinka qaarkood (shaxda 3.14); tusaale ahaan, Blumenstock waxay saadaalin kartaa 97.6% sax ah haddii qof leeyahay raadiyaha. Tani waxay noqon kartaa mid cajiib ah, laakiin marwalba waa muhiim in la barbardhigo habka saadaalinta adag ee looga hortagi karo beddel sahlan. Xaaladdan oo kale, bedel fudud ayaa ah in la saadaaliyo in qof kasta uu ku siin doono jawaabta ugu caansan. Tusaale ahaan, 97.3% jawaab bixiyeyaashu waxay sheegeen inay raadinayeen raadiye sidaa daraadeed haddii Blumenstock uu saadaaliyay in qof walba uu ku wargelin lahaa raadiyaha raadin lahaa sax ah 97.3%, taas oo si la yaab leh ula mid ah fulinta nidaamkiisa adag (97.6% saxnimada) . Si kale haddii loo dhigo, dhammaan xogta aragga iyo qaabaynta waxay kordhiyeen saxnaanta saadaasha laga bilaabo 97.3% illaa 97.6%. Si kastaba ha ahaatee, su'aalaha kale, sida "Miyaad leedahay baaskiil?", Saadaashu waxay ka fiicnayd 54.4% ilaa 67.6%. Guud ahaan, tirakoobka 3.15 ayaa muujinaya in qaar ka mid ah qaababka Blumenstock aysan horumarin wax badan oo ka soo horjeeda saadaasha aasaasiga ah ee fudud, laakiin taasi waxay u egtahay waxyaabo kale oo horumar ah. Si kastaba ha ahaatee, inaad aragto natiijooyinkaas, si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaadan u maleyneynin in qaabkan uu si gaar ah u rajeynayo.
Jaantuska 3.14: Xaqiijinta saadaalinta ee tusaalayaal tirakoob oo la tababaray diiwaanada call. Laga soo bilaabo Blumenstock (2014) , miiska 2.
Jaantus 3.15: Isbarbardhiga saxda ah ee saadaalinta ee tusaalayaal tirakoob oo la tababaray diiwaannada call-ka si loo saadaaliyo astaamaha fudud. Qodobbadu waa wax yar oo jilicsan si looga fogaado isku dhafka. Laga soo bilaabo Blumenstock (2014) , miiska 2.
Si kastaba ha noqotee, hal sano kadib, Blumenstock iyo laba shaqaale ah Gabriel Cadamuro iyo Robert On-ka ayaa lagu daabacay warqad Saynis ah natiijooyin aad u wanaagsan (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) . Waxaa jiray labo sababo farsamo oo muhiim u ah hagaajinta: (1) waxay adeegsadeen hababka cusub ee qaababka casriga ah (sida habka cusub ee injineernimada gaarka ah iyo qaabab kale oo casri ah si loo saadaaliyo jawaabaha ka yimid muuqaallada) iyo (2) halkii ay isku dayi lahaayeen inay ka jawaabaan jawaabaha shakhsiga Su'aalaha sahanka (tusaale ahaan, "Miyaad raadineysaa raadiye?"), waxay isku dayeen inay dejiyaan miisaaniyad isku mid ah hantida. Horumarinta tiknoolajiyada waxaa loola jeedaa in ay sameyn karaan shaqo macquul ah oo isticmaalaya diiwaanada wicitaanada si ay u saadaaliyaan hanti dadka loogu tala galay.
Si kastaba ha ahaatee, dadka saadaasha ah ee saadaalinaya, ma ahan himilada ugu dambeysa ee cilmi baarista. Xasuuso in yoolka ugu dambeeysan uu ahaa in la isku daro qaar ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee sahan baaritaanka iyo tirakoobyada si loo soo saaro qiyaasta saxda ah ee qiyaasta saboolnimada ee dalalka soo koraya. Si loo qiimeeyo awoodda ay u leeyihiin in ay gaaraan hadafkan, Blumenstock iyo asxaabta waxay isticmaaleen qaabkoodii iyo macluumaadkooda si ay u saadaaliyaan hanti dhan 1.5 milyan oo qof oo ku jira diiwaanka call. Waxay adeegsadeen macluumaadka geospatial ee ku jira diiwaanka call (xusuusnow in xogta ay ku jiraan meesha ugu dhow ee munaarada unugta ee wicitaan kasta) si loo qiyaaso meesha qiyaasta degaanka ee qof kasta (Jaantus 3.17). Isku-dubarida labadan qiyaasood, Blumenstock iyo asxaabtu waxay soo saareen qiyaasta juqraafi ahaanshaha hantida macaamiishu ku leedahay qaab-dhismeed aad u fiican. Tusaale ahaan, waxay ku qiyaasaan celceliska hantida ee mid kasta oo ka mid ah Rwanda oo ah 2,148 unug (qaybta ugu yar ee maamulka dalka).
Sidee bay ufilmaameedyadani u qeexeen heerarka saboolnimada dhabta ah ee gobolladan? Ka hor inta aanan ka jawaabin su'aashaas, waxaan rabaa inaan xoogga saaro xaqiiqda ah in ay jiraan sababo badan oo looga shakisan yahay. Tusaale ahaan, awooda lagu sameeyo saadaalinta heerka shakhsiyadeed wuxuu ahaa mid aad u buuq badan (sawirka 3.17). Iyo, in laga yaabo inay ka muhiimsan tahay, dadka haysta telefoonnada gacanta ayaa laga yaabaa inay si nidaamsan uga duwan yihiin dadka aan lahayn telefoonada gacanta. Sidaa daraadeed, Blumenstock iyo asxaabtu waxay la dhibaatoon karaan noocyada qaladaadka caynsanaanta ee ka soo horjeeda sahanka qoraalka ee 1936 ee aan hore u sharaxay.
Si aad u hesho dareen ah tayada qiyaasta ay qiyaasayaan, Blumenstock iyo asxaabtu waxay u baahdeen inay isbarbardhigaan wax kale. Nasiib wanaag, wakhti isku mid ah sida daraasaddooda, koox kale oo cilmi-baarayaal ah ayaa waxay sahaminta sahaminta bulshada ee Rwanda. Daraasadan kale-oo qayb ka ahaa barnaamijka Demographic and Health Survey-wuxuu lahaa miisaan ballaadhan wuxuuna isticmaalaa habab tayo sare leh, hab dhaqameed. Sidaa darteed, qiyaasaha ka soo baxa Daraasada Demogarka iyo Caafimaadka ayaa si macquul ah loo tixgelin karaa qiyaasaha dahabka ah. Marka labada qiyaasood ee la qiyaasey la barbardhigay, waxay ahaayeen kuwo la mid ah (sawirka 3.17). Si kale haddii loo dhigo, iyada oo la isku darayo qadar yar oo xogta xog raadinta ah, diiwaangelinta telefoonka, Blumenstock iyo asxaabtu waxay awoodeen inay soo saaraan qiyaaso la barbar dhigi karo kuwa ka soo jeeda hababka dahabka ah.
Shaki la'aan ayaa laga yaabaa inay natiijooyinkaas u aragto niyad jab. Marka laga reebo, hal hab oo loo eegayo iyaga ayaa ah in la sheego iyada oo la adeegsanayo xog weyn iyo barashada mashiinka, Blumenstock iyo asxaabtu waxay awoodaan inay soo saaraan qiyaaso in lagu yareeyn karo habab hore u jirey. Laakiin uma maleynayo inay tahay habka saxda ah ee looga fikiro daraasaddan laba sababood. Marka hore, qiyaasaha Blumenstock iyo asxaabta waxay ahaayeen qiyaastii 10 jeer oo degdeg ah iyo 50 jeer raqiis ah (marka kharashka lagu qiyaasay marka la eego kharashka isbeddelka). Sidii aan hore ugu dooday cutubkan, cilmi-baarayaashu waxay iska dhaga-tireen kharashka dhibaatadooda. Xaaladdan, tusaale ahaan, hoos u dhaca qiimaha ee kharashka micnaheedu waa in la sii wado in la sii daayo dhawr sano oo kasta - sida caadiga ah ee Diiwaanka iyo Caafimaadka Dajinta - sahankan noocan ah waa la socon karaa bil kasta, taas oo bixin doonta faa'iidooyin badan oo cilmi-baarayaasha iyo siyaasad kuwa sameeya. Sababta labaad ma aha in la qaato aragtida argtaanka leh waa in daraasaddaani ay bixiso qashin asaasi ah oo loo qoondeeyey xaalado cilmi baaris oo kala duwan. Cuntadani waxay leedahay labo keli ah iyo labo talaabo. Maaddooyinka waxaa ka mid ah (1) ilaha xogta oo weyn oo dhererkiisu hooseeyo laakiin khafiif ah (ie, waxay leedahay dad badan laakiin aan ahayn macluumaadka aad ubaahan tahay qof kasta) iyo (2) sahan oo cidhiidhi ah laakiin culus (ie, dad tiro yar, laakiin waxay haysaa xogta aad uga baahan tahay dadkaas). Maaddooyinkaas ayaa markaa la isku darayaa labo tallaabo. Marka hore, dadka labadaba xogta, waxay dhisaan habka wax lagu barto mashiinka oo isticmaalaya ilaha xogta weyn si loo saadaaliyo jawaabaha sahanka. Marka xigta, isticmaal habdhaqanka si aad ugu qiyaaso jawaabaha sahanka ee qof walba ee ku jira ilaha xogta weyn. Sidaa darteed, haddii ay jiraan su'aalo aad doonayso inaad dad badan waydiisato, raadi ilaha xogta weyn ee dadka laga yaabo in loo isticmaalo si loo saadaaliyo jawaabtooda, xitaa haddii aadan daneynin ilaha xogta weyn . Taasi waa, Blumenstock iyo asxaabtu maaha kuwo si dhab ah u danaynaya diiwaanada call; waxay kaliya daryeelayaan wicitaannada wicitaanada sababta oo ah waxaa loo isticmaali karaa inay saadaaliyaan jawaabaha sahanka ee ay daryeesheen. Tani waxay ku saleysan tahay kaliya dareen aan toos ahayn oo ku saabsan ilaha xogta weyn - waxay kordhineysaa kala duwanaansho weydiinta weydiinta, kaas oo aan hore u sharaxay.
Jaantuska 3.16: Shematic of daraasada by Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) . Wicitaanada wicitaanada ee shirkadda taleefanka ayaa loo beddelay jaantuska oo hal xaraf u ah qof kasta iyo hal tiir oo loogu talagalay qaab kasta (ie, variable). Marka xigta, cilmi-baarayaashu waxay dhiseen habka waxbarasho ee kormeerka ah si loo saadaaliyo jawaabaha sahan ee ka soo baxa shaxda qofka. Kadibna, qaabka kormeerka waxbarashada ayaa loo isticmaalay in lagu hirgeliyo jawaabaha sahanka ee dhammaan macaamiisha 1.5 milyan. Sidoo kale, cilmi-baarayaashu waxay ku qiyaaseen qiyaasta daganaanshaha dhammaan 1.5 milyan oo macaamiisha oo ku saleysan goobaha wicitaankooda. Marka labadan qiyaasoodo - qiimaha la qiyaasay iyo goobta la qiyaasey ee la isku daray, natiijooyinka waxay la mid yihiin qiyaasaha Demographic iyo Health Survey, oo ah sahan dhaqameed oo dahab ah (Jaantus 3.17).
Jaantus 3.17: Natiijooyinka laga helay Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) . Heerka shakhsi ahaaneed, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay sameeyaan shaqo macquul ah iyagoo saadaalinta hantida qof ka diiwaangashan. Qiyaasta hantida heer degmo ee 30 degmo Rwanda ah oo ku salaysan qiyaasta heerka khaaska ah ee hanti iyo degenaansho-waxay la mid tahay natiijooyinka ka soo baxay Sahanka Daraasaadka iyo Caafimaadka, oo ah sahan dhaqameed oo dahab ah. Laga soo bilaabo Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) , tirooyinka 1a iyo 3c.
Gebogebada, Baaritaanka Blumenstock ee isweydaarsiga xogta sahanka ee xogta la socota iyada oo ah ilaha xogta ee weyn si loo soo saaro qiyaaso la barbardhigo kuwa ka yimid sahan dahabi ah. Tusaalahan ayaa sidoo kale caddaynaya qaar ka mid ah ganacsiyada ka dhexeeya hababka sahan ee su'aalaha iyo dhaqanka. Qiyaasaha weydiinta ballaarinta waxay ahaayeen kuwo waqtigoodu aad u yaryahay, qiimo ahaanna ka jaban yahay, iyo waxyaalo badan oo qarsoodi ah. Hase yeeshee, dhinaca kale, ma jirto saldhigga xooggan ee xooggan ee noocan oo kale ah oo la weydiiyay. Tusaalahan keliya ayaa muujinaya marka habkani uu shaqeynayo iyo marka uusan noqon doonin, cilmi-baarayaashu waxay adeegsanayaan qaabkan waxay u baahan yihiin inay si gaar ah uga walaacaan xudduudaha suuragalka ah ee ay ku jiraan kuwaas oo ay ku jiraan-iyo kuwa aan lagu darin-macluumaadkooda weyn ee weyn. Dheeraad ah, habka codsiga sii kordhaya weli ma laha siyaabo wanaagsan oo lagu qiyaaso hubin la'aanta qiyaasteeda. Nasiib wanaag, waxa la weydiiyay balanqaad qoto dheer in saddex meelood oo ballaadhan lagu qiyaaso qiyaasta tirakoobyada yar-yar ee degaanka (Rao and Molina 2015) , sumcad (Rubin 2004) , iyo qaab-dib-u-habeyn dib-u-habeyn ah (kaas oo laftiisu si dhow ula xidhiidho Mr. P., habka aan hore u sharxay cutubka) (Little 1993) . Sababtoo ah xiriiriyahan qoto dheer, waxaan filayaa in badan oo ka mid ah aasaaska hanaanka ee codsigan sii kordhaya ayaa dhawaan la hagaajin doonaa.
Ugu dambeyntii, isbarbardhigka isku dayga kowaad ee Blumenstock ayaa sidoo kale muujinaya cashar muhiim ah oo ku saabsan cilmi-baarista bulshada ee da '-da ah: bilowga ma aha dhammaadka. Taasi waa, marar badan, habka ugu horreeya ma noqon doono kan ugu fiican, laakiin haddii cilmi-baadhayaashu ay sii wadaan shaqada, waxbaa ka sii fiicnaan kara. Guud ahaan, marka la qiimeeyo hababka cusub ee cilmi baarista bulshada ee da'da digital, waxaa muhiim ah in la sameeyo laba qiimeyn oo kala duwan: (1) Sidee ayuu u shaqeeyaa hadda? iyo (2) Sidee ugu fiicnaan doonaa tani mustaqbalka maadaama isbedelka xogta isbeddelayaan iyo sida cilmi-baarayaashu ay diiradda saarayaan dhibaatada? Inkastoo cilmi-baarayaasha loo tababaray inay sameeyaan nooca qiimeynta hore, haddana labaad ayaa ah mid muhiim ah.